iPhone မှ Wi-Fi မျှဝေနည်း ငါ mac ကပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနေသောအင်တာနက်အပေါ်မှီခိုမှုသည်၎င်းကိုပြောင်းလဲစေသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော သုံးစွဲသူများအတွက် မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်အကောင့်များကို ကြည့်ရှုရန်၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်၊ အဝေးမှ အလုပ်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကော်ဖီဆိုင်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများနှင့် စူပါမားကတ်များ လုံးဝအခမဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုပေးဆောင်သည့်တိုင် ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါသည်။ သို့သော် အမြဲတမ်း ထိုသို့မဟုတ်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သည်ကို သင်မြင်ဖူးပါက ဤဆောင်းပါးတွင် သင့်အား ဖော်ပြပါမည်။ iPhone မှ Wi-Fi မျှဝေနည်း။
အတိအကျပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ၏ မိုဘိုင်းဒေတာကို မျှဝေပါ။ အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်ကို ဖန်တီးပါ။
iPhone၊ iPad နှင့် iPod touch နှစ်ခုလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မိုဘိုင်းဒေတာမျှဝေရန် Wi-Fi ကွန်ရက်ကို ဖန်တီးနိုင်စေပြီး အခြားစက်ပစ္စည်းများမှ အင်တာနက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် Wi-Fi အချက်ပြမှု၏ ထပ်လောင်းများအဖြစ် အလုပ်မလုပ်ပါ။
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတာနဲ့၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှ အင်တာနက်ကို မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနှင့်မဆို မျှဝေပါ။
1 iPhone မှအင်တာနက်ကို Mac ဖြင့်မျှဝေပါ။
2 iPhone မှ အင်တာနက်ကို အခြားစက်များနှင့် မျှဝေပါ။
3 ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့် အင်တာနက် မျှဝေမရနိုင်ပါ။
4 အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမျှဝေခြင်းကို ရပ်ပါ။
iPhone မှအင်တာနက်ကို Mac ဖြင့်မျှဝေပါ။
တူညီသောထုတ်လုပ်သူမှထုတ်ကုန်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၏အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဂေဟစနစ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ပေးထားသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြေကြားခြင်း သို့မဟုတ် ခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာသားမက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများအကြား အကြောင်းအရာများကို မျှဝေခြင်း... ဖြစ်နိုင်ခြေများသည် iPhone နှင့် Mac တစ်ခုကြားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ဖြစ်သည်။
သို့သော် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ငါတို့လိုချင်ရင် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ၏အင်တာနက်အချက်ပြမှုကို Mac နှင့်မျှဝေပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone နှင့် အချိန်မရွေး အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက click ကိုနှိပ်ပါ တြိဂံ inverted မီနူးဘား၏ထိပ်တွင်ပြသထားသည်။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပြီး ၎င်းကို မည်သို့ပြသမည်ကို ကြည့်ရှုပါ။ Personal Access Point ကဏ္ဍရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone အမည်။
ချိတ်ဆက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်၏အမည်ကို နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ စကားဝှက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။တူညီသော ID နှင့်ဆက်စပ်နေသော စက်ပစ္စည်းများအကြား ကုဒ်ဝှက်ထားသောပုံစံဖြင့် လွှဲပြောင်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီနည်းလမ်းက အလုပ်လုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံး စက်နှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောအသုံးပြုသူ ID နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။. Mac ကဲ့သို့တူညီသော ID နှင့်မသက်ဆိုင်သော iPhone ၏အင်တာနက်အချက်ပြစနစ်သို့ချိတ်ဆက်လိုပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရပါမည်။
ချိတ်ဆက်မှုကို သမားရိုးကျ အသုံးပြုခွင့် ပွိုင့်မှ ကွဲပြားစေရန်၊ ပြောင်းပြန်တြိဂံကို ပြသမည့်အစား ၎င်းသည် ပြသမည်ဖြစ်သည်။ သံကြိုးနှစ်ကွင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ၏ထိပ်တွင် တူညီသောအိုင်ကွန်ကိုလည်း ပြသပါမည်။
iPhone မှ အင်တာနက်ကို အခြားစက်များနှင့် မျှဝေပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို မျှဝေလိုသော Mac ၊ ID တစ်ခုတည်းနှင့် မဆက်စပ်ပါ။iPhone တစ်ခုမှအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကိုမျှဝေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ Access point တစ်ခုဖန်တီးပါ ချိတ်ဆက်လိုသော Mac နှင့် စကားဝှက်ကို မျှဝေပါ။
ဤနည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သုံးသင့်သည့် တူညီသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Windows သို့မဟုတ် Linux PC ဖြစ်စေ၊ Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်စေ iPhone မှ အင်တာနက်ကို အခြားစက်ပစ္စည်းနှင့် မျှဝေပါ။ သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သော အခြားစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု။
မသန်စွမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှအင်တာနက်မျှဝေပါ။အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်၏ ဆက်တင်များကို ဝင်ရောက်ပြီး ကလစ်နှိပ်ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဝင်ခွင့်အမှတ် (ဤရွေးချယ်မှု မပေါ်ပါက နောက်အပိုင်းသို့ သွားပါ။)
ထို့နောက်အပိုင်း၌ ဝိုင်ဖိုင်လျှို့ဝှက်နံပါတ် ချိတ်ဆက်မှုမျှဝေလိုသော စကားဝှက်ကို ရေးရပါမည်။ ပုံသေအားဖြင့် Apple သည် ၎င်းကိုမပြောင်းလဲလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့် ကျပန်းတစ်ခုကိုပြသသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် switch ကိုနှိပ်ပါ။ အခြားသူများကို ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါ။.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုးမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပွိုင့်ကို ဖန်တီးပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှ ဖန်တီးထားသော Wi-Fi အချက်ပြစနစ်သို့ ချိတ်ဆက်လိုသည့် ကိရိယာသို့ သွားကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်၏အမည်ကို ရှာဖွေသည်။ ကြိုးမဲ့အချက်ပြမှုများကြားတွင်ပြသထားသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့် အင်တာနက် မျှဝေမရနိုင်ပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သည် အော်ပရေတာတစ်ခုမှ ထွက်ပေါ်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် အော်ပရေတာကို ပြောင်းလဲပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်တင်များ မီနူးသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါတွင် မိုဘိုင်းဒေတာ ရွေးချယ်မှုသာ ပေါ်လာနိုင်သည်၊ Personal Hotspot မီနူး မပေါ်ပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီပြဿနာ ပိုမိုရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ အစကတော့ စိတ်ကူးထားတာထက်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ကွန်ပြူတာထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ၏ဆက်တင်များ။
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ မိုဘိုင်းဒေတာ ပြီးတော့၌တည်၏ မိုဘိုင်းဒေတာကွန်ယက်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လုပ်ရမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာ၏ access point အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်းပါ၊ ဖော်ပြထားသည့်ဒေတာကို မူရင်းအော်ပရေတာပိုင်အဖြစ် အစားထိုးခြင်း။
ဤအချက်အလက်များသည် APNs ဟုခေါ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာသို့ခေါ်ဆိုကာ «APN -N စာသားဖြင့်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဤအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါသည်။အော်ပရေတာအမည်» အဆိုပါကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာ၏ဒေတာကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။ iPhone ကို restart ချလိုက်ပါ။
iPhone ပြန်လည်စတင်သောအခါ၊ Personal Hotspot မီနူးကို ပြသပါမည်။ Mobile Data ဘေးမှာ။
ဤသင်ခန်းစာတွင် ကျွန်ုပ်ပါဝင်သည့် ဖမ်းယူမှုအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးစရာများရှိပါကမှတ်ချက်များမှတဆင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ရန်တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့။
ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော ကြိုးမဲ့ဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့်နေရာမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်အချက်ပြမျှဝေခြင်းကို ရပ်တန့်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလှမ်းများနှင့် ခြေရာခံရပါမည်။ switch ကို disable အခြားသူများကို ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ၏ အင်တာနက်ကို အခြားသော Apple မဟုတ်သော စက်များနှင့် မျှဝေပါက၊ ၎င်းသည် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဒက်စ်တော့ရှိမရှိ သိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်စနစ်အပ်ဒိတ်များ၊ ဂိမ်းများ သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများကိုမဆို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှမရှိဘဲ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple စက်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် signal ကိုမျှဝေပါက၊ ၎င်းသည် မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ Low Data မုဒ်ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် ဒေတာအသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ပါမည်။ ကွန်ရက်ရွေးချယ်မှုများအတွင်း။
ဒီသေတ္တာကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပါ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် Mac မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone မဟုတ်သည့် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် Wi-Fi ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်နေပါသည်။
ဤနည်းဖြင့် စနစ်ကျသည်။ မည်သည့်စနစ်အပ်ဒိတ်အမျိုးအစားကိုမျှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။အက်ပ်များမှနေ၍ iCloud ဓာတ်ပုံများကို စင့်ခ်လုပ်ခြင်းကို ပိတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » iPhone မှ Wi-Fi မျှဝေနည်း
Humble၊ Apple Silicon ပရိုဆက်ဆာများနှင့် အခြားအရာများကို ဖယ်ရှားခြင်း။ Mac မှ တစ်ပတ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။